क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड दिन किन चाहिए यति धेरै कागजात? :: Setopati
क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड दिन किन चाहिए यति धेरै कागजात?
विवेक राई काठमाडौं, साउन २१
स्वास्थ्य सेवा विभागले आजबाट क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड दिने भएको छ।
त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाइटमा गई अनलाइन रजिष्ट्रेसन गरेर फारम भर्न सकिने जनाइएको छ।
साथै अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेले मागिएको कागजात लिई कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा आएर फारम भर्न सक्ने विभागका स्वास्थ्य अधिकृत दीपक झाले जानकारी दिए।
खोप कार्डका लागि फारम भर्दा आठ वटा कागजात पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। जसले गर्दा सामान्य मान्छेलाई उक्त फारम भर्नै गाह्रो हुने देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार खोप कार्डका लागि सक्कल राहदानी र खोप कार्ड, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो एक प्रति, राहदानी र खोप कार्डको प्रतिलिपि, कबुलियतनामा र भिसा र टिकटको फोटोकपी मागिएको छ।
खोप कार्डका लागि यति धेरै कागजात मागिएपछि यसले थप झन्झट सिर्जना गर्ने भन्दै यसलाई सरल बनाउनु पर्ने सर्वसाधरणको माग छ।
विभागका स्वास्थ्य अधिकृत झाले सूचनामा खोप कार्डका लागि आठ वटा कागजात मगिए पनि ती सबै व्यक्तिको हकमा लागू नहुने बताए। उनले सबै कागजात नचाहिने उल्लेख गर्दै सेतोपाटीसँग भने, 'खोप कार्डका लागि चार वटा कागजात भए पुग्छ। कार्डमा फोटो चाहिएकाले फोटो मागेका छौं। त्यस्तै पासपोर्ट नम्बर चाहिएकाले पासपोर्ट मागिएको हो। बाँकी खोप कार्ड र मञ्जुरीनामा मागेका हौं। त्यसैले अनलाइन फाराम भर्नेहरूका लागि बाँकी फोटोकपी केही पनि चाहिँदैन। यति चार वटा कागजात पेश गरे हुन्छ।'
उनले अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेहरूको हकमा मात्र बाँकी कागजात मागिएको बताए। साथै मानिसहरूको अवस्था हेरेर प्राथमिकीकरण गर्नका लागि पनि बाँकी कागजात मागिएको झा बताउँछन्।
'भोलि १० हजार जनाले उडान छ भनेर कार्ड माग्यो भने एकैचोटी त्यत्रो मानिसलाई कार्ड दिन सकिँदैन। त्यसैले जसलाई तुरून्त उड्नु छ उसले प्रमाणका लागि भिसा र टिकटको प्रतिलिपि देखाउनुपर्छ,' उनले भने, 'बाँकीका हकमा भने अरू कुनै कागजात चाहिँदैन। त्यही चार वटा भए पुग्छ।'
झाले आजै बेलुकादेखि क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड दिन थालिने जनाए। आफू अहिले पनि कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमै रहेको र मानिसहरूको फाराम लिन सुरू गरिएको भन्दै उनले भरे राति र भोलि बिहान उडान भएकाहरूलाई साँझ नै खोप कार्ड वितरण गरिने बताए।
उनका अनुसार अब अनलाइन फाराम भर्न नसक्नेहरू सोझै कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पताल गएर फारम भर्न सक्नेछन्। त्यहाँ विभागका कर्मचारी रहेकाले मानिसहरूले मागिएको कागजात मात्र बुझाए पुग्ने उल्लेख गर्दै झाले भने, 'उहाँहरूले कागजात मात्र दिए हुन्छ। बाँकी फाराम भर्ने काम हामी नै गर्दिन्छौं।'
उनले फाराम भरेपछि खोप कार्ड एक घन्टादेखि तीन दिनभित्रमा पाइने बताए। एकदिनभित्रै उडान भएकाहरूका लागि भने केही घन्टाभित्रै कार्ड दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको झाले जनाए। बाँकी अत्यावश्यक काम नभएकाहरूले भने तीन दिनभित्र खोप पाउने उनले बताए। अनलाइन फाराम भरेपछि तीन दिनभित्र निज व्यक्तिलाई मेसेज आउने र त्यसैबाट खोप कार्ड डाउनलोड गर्न सकिने झा बताउँछन्।
सरकारले यसअघि भने क्युआर कोड बिनाको खोप कार्ड वितरण गर्दै आएको थियो। तर त्यसरी कार्ड वितरण गर्दा अस्पतालहरूमा खोप कार्ड लिनेहरूको अत्याधिक भिड भएपछि सर्वत्र विद्युतीय खोप कार्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग भएको थियो। सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले आजबाट क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड वितरण गर्न सुरू गर्ने भनेको हो।
यद्यपि अस्पतालहरूमा खोप कार्ड वितरण कार्य भने रोकिएको छैन। टेकु अस्पतालमा आज पनि खोप कार्ड लिनेहरूको लाम रहेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए। क्युआर कोडसहितको विद्युतीय खोप कार्ड आजबाट वितरण सुरू भए पनि केही दिन त्यसको चाप थेग्दिनु भन्ने आग्रह भएको भन्दै कोप कार्ड सेवा यथावत् रहेको निर्देशक बास्तोलाले बताए।
'क्युआर कोडसहितको खोप कार्ड भर्खर सुरू भएकाले त्यहाँको चाप केही दिन थेग्दिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभो। त्यसैले दुई-चार दिन अझै खोप कार्ड दिने सेवा चल्छ होला। त्यसपछि त स्वत: कम हुँदै जान्छ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २१, २०७८, १२:५१:००